Faaiidooyinka Vitamin A,C,B,D,E iyo shaqada ay jidhka u qabtaan - Caafimaad tips
Home / Caafimaadka / Cuntada / Faaiidooyinka Vitamin A,C,B,D,E iyo shaqada ay jidhka u qabtaan
Faaiidooyinka Vitamin A,C,B,D,E iyo shaqada ay jidhka u qabtaan
Shaqada ay vitamiinku jidhaka u qabtaan iyo waxtarkooda
Dhammaanteen waxaan filaynaa ina fiitamiinada ay jidhkeena caafimaad u leeyihiin haa waa sax sidoo kale dhammaanteen waxaynu macluumaad kooban ka haysanaa fiitamiinada, waxaase shabakada wehesho halkan kuugu soo gudbinaysaa kuuna faahfaahinaysaa shaqada rasmiga ah ee ay jidhka u qabtaan fiitamiinadu.
Waa maxay shaqada fiitamiinadu ?
Macdanaha fiitamiinadu waxay jidhka u qabtaan dhammaan wixii uu u baahnaa balse vitamins ka waxay u kala bixi karaan laba qaybood oo kala ah mid dabiici ah oo laga helo waxyaabaha alle dhulka ka soo saaray sida khudaarta noocyadeeda kala duwan iyo mid warshadaysan sida kaniiniga iyo sharoobada .
Fiitamiinkan lagu magacaabo Vitamin A wuxuu jidhka u leeyahay kuna soo kordhiyaa caafimaad gaar ahaan wuxuu wax u taraa oo u wanaagsan yahay Indhaha, ilkaha iyo maqaarka.
Sidoo kale Vitamin B wuxuu u wanaagsan yahay wax weyna u taraa isla markaana xoojiyaa Difaaca jidhka bini aadamka wuxuu u fiican yahay birta dhiiga ku jirta wuxuuna hagaajiyaa dheecaanada jidhka waaa awood siiyaha jidhka.
Midkan waxaan odhan karnaa waa midka soomaalidu sida waadixa ah u taqaano oo waxayba yidhaahdaan vitamin c gaaga ayaa cirka maraaya iyagoo uga jeeda waad fiican tahay, Vitamin C wuxuu xoojiyaa oo mid caafimaadkiisa kor u qaadaa dhiiga jidhka ayuu dabciyaa oo qurxiyaa shaqadiisu waa inuu jidhka birta ku jirta hagaajiyo.
Vitamin D isagu laba shaqo oo kaliya balse muhiimad gaar ah leh ayuu jidhka u qabtaa waana inuu awood qofka siiyo lafaha qofkana dhiso.
Midkan wuxuu jidhka siiyaa awood uu jidhku isaga ilaaliyo shucaaca dibada uga imanaaya wuxuuna wanaajiyaa wareega dhiiga.
Qormooyin kale oo xiiso badan
Akhriso cuntooyin indhaha u fiican
Akhriso faaiidooyinka bunka ama kafeega
Waxaynu hore ugu sii soconaynaa inaan qeexno ama aynu sharaxno faaiidooyinka ku jira macdanaha kuwaas oo jidhkeenu u baahan yahay sidaas dartee hoos ka fiiri macdanta iyo jidhka waxay u qabtaan
Macdanta Folic Acid
Macdanta folic acid waxay cusboonaysiisaa unugyada waxayna ka hortagtaa inay cilado ku yimaadaan awlaada dhalanaysa ama uurka ku jirta.
Af soomaali ahaan waxaa loo qoraa sidan Kaalshiyaam markaa hadii aad meelaha qaar ku aragto waa inaad u garataa in looga jeedo kalmada ingiriiska ah ee Culcium oo ah macdan jidhkeenu u baahan yahay, hadaba macdanta culcium waxay u wanaagsan tahay caafimaadka ilkaha iyo lafaha.
Birta maaha birta xadiidka ah ee aynu naqaano laakiin waa macdan jidhkeena ku jirta kuna badnaan karta kuna yaraan kartaa laakiin laynaga rabo inaan helno xadi inagu filan macdanta birta faaiidadeeda waa inay si dabiici ah lafaha u dhisto sidoo kale ay ilaaliso caafimaadka guud ee qofka.
Macdata zinc waxay u wanaagsan tahay bacriminta iyo difaaca jidhka sidoo kale waxay u roon tahay laguna amaanaa inay koritaanka qofka .